Maamulka G.Banaadir oo joojiyey soo dejinta Bajaajka - Ceelhuur Online
Home > Wararka Maanta > Maamulka G.Banaadir oo joojiyey soo dejinta Bajaajka
Maamulka G.Banaadir oo joojiyey soo dejinta Bajaajka
October 6, 2018 admin464
Duqa Muqdisho ahna Guddoomiyaha Gobolka Banaadir Mudane Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan (Eng. Yarisow) ayaa soo saaray wareegto lagu mamnuucayo in laga soo dejiyo dekedda iyo dhammaan soohdimaha dhulka ee magaalada Muqdisho gaadiid Mooto Bajaajka ah oo cusub.
Guddoomiyaha ayaa u muddeeyey labo bilood oo maanta ka bilaabanaysa, dadka ay haatan kaga jiraan gaadiidkaasi dekedda iyo kastmyada magaalada Muqdisho.
Eng.Yarisow ayaa kula dardaarmay wadeyaasha gaadiidka Bajaajka ee ka dhex shaqeeya Caasimadda in ay ka digtoonaadaan khataraha shilalka oo marar badan ay soo diiwaan geliyeen Ciidanka Ilaalada Waddooyinku shilal sababay khasaare nafeed iyo mid maalba.
Sidoo kale, Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ayaa adkeeyey muhiimadda ay leedahay in wadeyaasha Bajaajku ay si dhaw ula shaqeeyaan laamaha ammaanka, una hoggaansamaan tallaabooyinka lagu sugayo amniga iyo hannaanka waddo marista Caasimadda.
Go’ankan ayaa salka ku haya talo soojeedin ka timid Taliska Ciidanka Booliska Soomaaliyeed oo odoroosay tirade xad dhaafka ah ee gaadiidka Bajaajka ee ka dhex shaqeeya magaalada Muqdisho iyo saameynta ay ku leeyihiin amniga Caasimadda.
Fanaanadda Shamso Shumey oo Xalay ku geeriyootay Muqdisho
Turkiga oo Saraakiil u tababaray Xoogga Dalka (Sawirro)
Madaxwayne Xaaf oo kasoo muuuqday xiritaanka madasha iskaashiga Soomaaliya
October 2, 2019 Duceysane
Cumar C/rashiid oo dhaliilay Dowladda Soomaaliya
Al-shabaab oo Fatwo kasoo saaray hadalkii C/raxmaan C/shakuur
December 5, 2019 Duceysane